Nero အသုံးပြုနည်း လက်စွဲ (မြန်မာ)
ဒါကတော့ ညီလေးတစ်ယောက် chat box မှာ တောင်းဆိုထားတာတွေ့လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် . Nero မှာပါပဲ Tools တွေကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ ဆိုတာကို ရှင်းပြထားတာပါ . အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် . လိုချင်ရင် အောက်ကနေ download လုပ်ပြီး ယူလိုက်ပါ ။ .
Download ifile.it | Mediafier | Zhare | Ziddu | megaupload